ओमिक्रोनको लक्षण कसरी चिन्ने ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रकाशित मिति : २०७८, ४ माघ मंगलबार
जनकपुरधाम , ४ माघ : विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च ज्वरो, लगातार खोकी र गन्ध तथा स्वाद थाहा नपाउनेजस्ता लक्षणलाई कोभिडका मुख्य लक्षणको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । तर, तेस्रो लहर भित्र्याएको ओमिक्रोनको लक्षण डेल्टाको भन्दा फरक रहेको पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।
अधिकांश संक्रमितमा घाँटी दुख्ने र टाउको दुख्नेजस्ता सामान्य लक्षण मात्रै देखिएका छन् । स्वाद वा गन्ध हराउने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या ५० प्रतिशतमा देखिएको बेलायतका वैज्ञानिकहरूको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ढाड दुख्ने, थकित महसुस हुने, शरीर मन्द तात्ने, वाकवाकी लाग्ने, पखाला लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएका छन् । रुघाखोकीको सामान्य लक्षण खोकि लाग्ने, घाँटी खसखस गर्ने हुन्छ ।
श्वास–प्रश्वासमा समस्या नहुँदा अधिकांशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन  ‘सामान्य लक्षण देखिनु सकारात्मक पक्ष हो, तर भाइरल लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।